कम्युनिजमसँग डराउनुपर्दैन, शेरबहादुरजी नरोईकन बस्नुहोला बुढानिलकण्ठतिर : झलनाथ खनाल
आगामी चुनावपछि वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिबिचको तुलना हुने छ । अहिले वामपन्थी र नेपाली कांग्रेस दुवै पक्षले चुनावपछि आफूले सरकार बनाउने दाबी गर्दै आएका छन् । वामपन्थीको सरकार बन्यो भने कम्युनिष्ट शासन प्रयोग हुन्छ भनेर पनि टिप्पणी भइरहेका छन् । यिनै विषयमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग ऋषि धमलाले कुरा गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
इलामका जनताले तपाईलाई धेरैपटक चुनाव जिताए । प्रधानमन्त्री र एमालेको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो । तर जनताले सोचेअनुसारको काम गर्न सक्नुभएन भन्ने आरोप छ नि ?
त्यस्तो होइन । तपाईले कहाँबाट कसको कुरा सुन्नुभयो । जनताले अहिले छैटौँ पटक पनि मलाई नै चुनाव उठ्न आग्रह गरेका हुन् । इलाम जिल्लामा अरु सबै काम भएका छन्, नभएको एउटै भनेको त्यहाँ नेपाली कांगेस कमजोर बन्दै गयो । अहिले पनि कांग्रेसको शर्मनाक पराजय हुन्छ । त्यसैले यस ठाउँमा कांग्रेसको विकास चाँही नभएकै हो । हेर्दै जानुहोला म अत्याधिक मत ल्याएर जित्छु ।
चिया खेतिका लागि प्रसिद्ध इलामका जनताले उत्पादन गरेको चियाको बजार विस्तार भएन भन्ने गुनासो छ नि ?
इलामको चिया यो देशकै गहना हो । हामीले बनाएको चिया बगानलाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले कौडीको मूल्यमा बेचिदियो । त्यसपछि धेरै अव्यवस्थित भयो । विदेशी लगानीका कारखानाहरु स्थापना भए । चियाको मूल्यमा गिरावट आयो । अहिले फेरी हामीले साना खालका चिया उद्योग विस्तार गर्दै लगेका छौँ । किसानको जीवनस्तर उकासिएको छ । चियाको मूल्य बढेको छ ।
इलामको पशुपतिनगरमा पनि विकास भएन भन्ने गुनासो जनताले गरेका छन् । के छ त्यहाँको अवस्था ?
तपाईले खाली नकारात्मक प्रश्न मात्रै सोधिरहनुभएको छ । आज किन हो कुन्नी । पशुपतिनगरमा के समस्या छ । तपाईलाई समस्याको बारेमा थाहा नै छैन । बेकारका कुरा गर्नुहुन्छ ।
तपाई बताइदिनुस् न त पशुपतिनगरमा के समस्या छ ?
पशुपतिनगरमा राम्रोसँग विकास हुँदैछ । भारतसँगको सिमाना हो । पारीपट्टी गोरखाल्याण्ड आन्दोलन चलिरहेको छ । त्यसले गर्दा सुरक्षा लगायतका समस्या छन् । तर पशुपतिनगरमा धेरै विकास भएको छ ।
अबको निर्वाचनपछि वाम गठबन्धनले के गर्छ ?
चुनावपछि बाम गठबन्धनले सरकार गठन गर्छ । त्यसपछि देश विकासका लागि सबै काम सफलतापूर्वक गछौँ । हामीले सरकार गठन गरेपछि इलाममा मात्रै होइन, देशका ७७ जिल्ला वटै जिल्लामा विकास गछौँ । नयाँ लहर सृजना हुन्छ देशमा । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा सानो लहर उठेको थियो । अब त्योभन्दा ठूलो लहर अब सृजना हुन्छ ।
तपाईहरुको घोषणापत्रमा कांग्रेसलगायतकका दलहरुलाई विभिन्न आरोप लगाइएको छ । किन यसरी गाली गरिएको हो ?
वाम गठबन्धनको घोषणापत्र नेपाल नव निर्माणका घोषणापत्र हो । देशलाई पुनः संरचना गरेर लैजाने घोषणा हो ।
विकास निर्माणका जति पनि योजना घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ, त्यो कति सम्भव छ ?
घोषणापत्र एकदम राम्रो छ । नेपाली जनताको आयस्तर कसरी बढाउने, जलविद्युत उत्पादनलाई कसरी बढाउने भन्ने लगायतको कुरा तथ्याङ्क अनुसार समावेश गरेका छौँ । नेपालको राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिकलाई सुदृढ गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । नेपालका साधन स्रोतको प्रयोग गरेर पर्यटकीय थलोको रुपमा विश्वकै गन्तव्यको रुपमा नेपाललाई चिनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । वाम गठबन्धनले सम्भव बनाएरै छाड्छौँ ।
वामगठन्धनमा चुनाव जितिसकेपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विवाद हुने होला ? विकासका काम कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामी निरन्तर बहस गरेर वादेवादे जायते तत्ववोध भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ । हामीसँग विवाद छ भन्न कुनै आपत्ति छैन । तर हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ । हामी सामुहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छ । हामीले चुनाव जितेर आएपछि मिलेर काम गछौँ । प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यता भएका मान्छे पनि एक दर्जन छन् । सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख बनाउँछौँ । अनेक बनाउँछौँ । तर अहिले नै घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्ने कांग्रेसको शैली वाम गठबन्धनमा छैन ।
चुनावपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
अहिले हामीले केही पनि निर्णय गरेका छैनौँ । पहिला हामी निर्वाचन सम्पन्न गछौँ । जुन प्रकारको संसदमा संरचना आउँछ, सोही अनुसार हामी सरकार बनाउँछौँ । तर वाम गठबन्धनको अत्याधिक बहुमत आउँछ । यसमा कुनै शंका छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त वाम गठबन्धनले सरकार बनायो भने रुन पनि पाइदैन भन्नुभएको छ नि ?
ठीक छ, उहाँ नरोईकन बस्नुहोला बुढानिलकण्ठतिर । तर तपाईलाई अब रिपोर्टर्स क्लब कसरी चलाउने भन्नेबारेमा सोच्नुस् । वामपन्थी सरकार भएपछि हामी मद्दत गरौँला नि । तर कम्युनिष्ट सरकार आउँदैन । कम्युनिजम आउनका लागि धेरै लामो समय लाग्छ । दशकौँ होइन, धेरै वर्ष लाग्छ । अहिले कसैले पनि कम्युनिजम आउला भनेर डराउनुपदैन । वास्तवमा मानव जाती २० लाख वर्षसम्म कम्युनिजममा थियो । विस्तारै समाजवादतर्फ जाँदैछौँ । नबुझ्नेहरुले जे पनि भन्छन् । अब हामी विस्तारै बुझाउँदै जान्छौँ । अहिले हामी समाजवादतर्फ जाने हो । साम्यवाद होइन ।
साम्यवाद नै ल्याउन खोज्दैहुनुहुन्छ भन्ने आशंका छ नि ?
त्यो लक्ष्य त छदैछ नि । नबुझ्नेहरुले अनेकप्रकारले विकृत रुपमा प्रस्तुत गर्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । हामी विस्तारै बुझाउँदै जान्छौँ, समाजवाद भनेको के हो ? साम्यवाद भनेको के हो, त्यो नबुझ्नेहरुले तथानाम प्रचार गर्नु बेग्लै कुरा हो । नेपाललाई कम्बोडिया जस्तो बनाउँछन् भनेर भन्नु तल्लो स्तरको सोच हो । नेपालको वामपन्थी शक्ति जन्मदै लोकतन्त्रका निम्ती जन्मिएको हो । देशभक्ति, शान्ती, समाजवाद, जनजिवीका र राष्ट्रियताका लागि जन्मिएको हो ।
चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, ८ जनाको मृत्यु
विवकेशिल साझा पाटीका नेताहरु हाम्रो पार्टीमा प्रवेश
डोटीमा प्रदेशसभा ‘ख’ को मतगणना स्थगित भएको छ। मतगणना भैरहदा कर्मचारीेले नतिजा इन्ट्री गर्दा मत घटाएको भेटिएपछि विवाद भएको थियो।
नयाँ शक्ति र संघिय समाजवादी फोरमको एकता रोकिनुको रहस्य यसरी खोले राजेन्द्र श्रेष्ठले
रानीपोखरीको निर्माण पुरानै शैलीबाट गरिने